လူဇင်ဘတ်မှာ SARL ၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - လူဇင်ဘတ်မှာ LLC
လူဇင်ဘတ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
Million Makers Luxembourg သည်လူဇင်ဘတ်နှင့်လူ ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုဖောက်သည်များအားပေးသည်။
လူဇင်ဘတ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကိရိယာများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
လူဇင်ဘတ်နှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံတို့အတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။
လူဇင်ဘတ်နှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ ခု၊ လူဇင်ဘတ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်အတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ လူဇင်ဘတ်အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ လူဇင်ဘတ်အတွက် Virtual နံပါတ်၊ လူဇင်ဘတ်အတွက် CRM Solutions၊ လူဇင်ဘတ်အတွက် virtual ရုံး၊ လူဇင်ဘတ်လူဝင်မှုတိုင်ပင်မှုနှင့် ၁၀၉ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏လူဇင်ဘတ် SARL နာမည်ကိုရယူပါ။
သင်၏လူဇင်ဘတ် SARL အမည်ကိုရှာပါ
လူဇင်ဘတ်၏ပထဝီဝင်အနေအထားအရဒေသနှစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်။ Oesling၊ Ardennes အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပိုင်းအစတစ်ခု၊ မြောက်ဘက်တွင်ကြီးမားသောရောနှောထားသောသစ်တောများနှင့်မညီမျှမှုရှိသော,ရိယာနှင့် Gutland (“ ကြီးကျယ်သောနိုင်ငံ”) - တောင်ဘက်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်မြို့ပြဒေသဖြစ်သည်။
၂၅၈၆ ကီလိုမီတာစတုရန်းကီလိုမီတာ (၉၉၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ရှိပြီးလူဇင်ဘတ်သည်အိမ်နီးချင်းဘယ်လ်ဂျီယံထက်အဆများစွာပိုမိုကျိုးနွံသည်။
လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဂျီဒီပီသည်ဥရောပ၏ပုံမှန်ထက်နှစ်ဆကျော်ပိုများသည်။ လူဇင်ဘတ်အားကမ္ဘာပေါ်ရှိသာမာန်ထက်များသောနိုင်ငံများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ကောင်းမွန်သောစရိတ်စနစ်ကလူဇင်ဘတ်တွင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အကြောင်းပြချက်များတည်ဆောက်ရန်မိတ်ဖက်များအားတိုက်တွန်းသည်။ အားသာချက်တစ်ခုမှာဝင်ငွေများနှင့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်အရောင်းအ ၀ ယ်များအပေါ်စွဲချက်တင်ထားခြင်းမရှိခြင်းသည်ဤအခကြေးငွေများကိုထုတ်လုပ်မှုရှိသည့်ဒေသတွင်းရှိအခွန်အကဲဖြတ်မှုမှလွတ်မြောက်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းသာဖြစ်သည်
၉၆၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလူဇင်ဘတ်သည် ၁၈၁၅ တွင်အံ့အားသင့်ဖွယ်နယ်မြေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနယ်သာလန်လက်အောက်ရှိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ၁၈၃၉ တွင်ဘယ်လ်ဂျီယံကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပိုများလာသည်။ လူဇင်ဘတ်သည်ဒေါ်လာ ၇၉,၅၉၃,၉၁ ရှိသောလူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပုံမှန်ဂျီဒီပီရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကျဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံများ၌နေထိုင်စဉ်ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံများ၌အလုပ်လုပ်နေသူအမြောက်အများကြောင့်ဤကိန်းဂဏန်းမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ်သော်လည်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေထိုင်နိုင်သည့်လူဇင်ဘတ်သည်ခိုင်မာသောစီးပွားရေးဝန်းကျင်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာပြင်သစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံများမှအခြေခံအားဖြင့်ရောက်ရှိလာသောအလွန်ဝေးကွာသောဖြတ်ကျော်လုပ်သားများကြောင့်ဖြစ်သည်။
စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ လူဇင်ဘတ်သည်စီးပွားရေးစင်တာတစ်ခုအနေနှင့်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ထပ်တိုးရန်အတွက်သူ့ဟာသူပြန်လည်စစ်ဆေးရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ အဆိုပါလျော်ကြေးပေးမှုများသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဂျီဒီပီအပေါ်မူတည်နေသည့်အချက်အပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်နိုင်ငံတွင်မနေထိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အထီးကျန်ထားသည့်အရေအတွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်း၊ နိုင်ငံသည်ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းကြီးများ၏နေအိမ်ဖြစ်သည်။ လူဇင်ဘတ်သည်ဆယ်ရာစုတွင်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှသည်များပြားလှသောပြည်နယ်နှင့်ဘုံစံသတ်မှတ်ချက်အောက်တွင်ကျရောက်ခဲ့သည်။ ၁၈၁၅ တွင်ဟပ်စဘတ်များလက်အောက်တွင်လူဇင်ဘတ်သည်နယ်သာလန်နှင့်ပေါင်းသင်းခဲ့သည်။ ရေရှည်တွင်ကန့်သတ်ချက်များရှိသောနိုင်ငံသည်လွတ်လပ်မှုကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။
လူဇင်ဘတ်သည်အာဏာရှိသောအိမ်တစ်လုံးရှိသောပါလီမန်တည်ထောင်ထားသောအစိုးရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Duke သည်အုပ်ချုပ်ရေးကိုရွေးချယ်သော်လည်းသူ၏တပ်ဖွဲ့များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဆန္ဒမဲပေးရမယ်။
လူဇင်ဘတ်သည်တစ် ဦး ချင်းဥရောပသမဂ္ဂတွင်အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးနေထိုင်သူများသည်သီးသန့်နေထိုင်မှုလိုအပ်ချက်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ကြသည်။ လူဇင်ဘတ်သည်ကြီးမားသောပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ငွေကြေးနယ်ပယ်သည်စီးပွားရေးကိုအကြီးမားဆုံးထောက်ခံသူဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏အခြေခံအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုအောင်မြင်သူများမှာဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ဖြစ်သည်။
လူဇင်ဘတ်၏ထိပ်တန်းလစာစီးပွားရေးတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ တိုးချဲ့မှုနှင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းနိမ့်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသံမဏိဖြင့်လွှမ်းမိုးသောစက်မှုareaရိယာသည်ဒြပ်ဝတ္ထုများ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဂီယာ၊ elastic၊ ကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများထည့်သွင်းရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာသည်။
သံမဏိများသည်ဒသမရာစုအထိတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်လူဇင်ဘတ်၏အတွေ့အကြုံများသည်၎င်း၏ထူးခြားထင်ရှားသောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအထူးသဖြင့်ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့်ခိုင်မြဲစွာဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်း၏နေထိုင်သူအတော်များများသည်ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်နှင့်လူဇင်ဘတ်စကားသုံးဘာသာစကားရှိသည်။ အဖွဲ့ ၀ င်မဟုတ်ကြောင်းကြေငြာခြင်းမရှိဘဲလူဇင်ဘတ်သည်ကမ္ဘာစစ်နှစ်ခုလုံးတွင်ဂျာမနီကပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပြန်လည်အားဖြည့်သောအလုပ်အကိုင်အပြီးတွင်လူဇင်ဘတ်သည်သူ၏သမာသမတ်ကျမှုကိုစွန့်ခွာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ရှေ့တန်းပရိသတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိ Company Incationation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများကိုအဆုံးသတ်ရန်စတင်သည်။ လူဇင်ဘတ်တွင်သင်၏အလုပ်အကိုင်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ လူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူခြင်း၊ လူ ၀ င်ငွေလူဇင်ဘတ်၊ လူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးအကဲဖြတ်မှု၊ လူဇင်ဘတ်ရှိ CRM Solutions၊ ကုန်သည်အကောင့်လူဇင်ဘတ်၊ ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်လူဇင်ဘတ်၊ လူဇင်ဘတ်တွင် Web Development၊ လူဇင်ဘတ်တွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူဇင်ဘတ်ရှိ Ecommerce Development၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိအပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူဇင်ဘတ်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
လူဇင်ဘတ်တွင်တည်ထောင်ပြီးသောကုမ္ပဏီများအတွက် - လူဇင်ဘတ်နှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လူဇင်ဘတ်မှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများကိုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ရှိသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ၀ န်ထမ်းများအားလူဇင်ဘတ်တွင်ငှားရမ်းရန်ကူညီပေးပါသည်။ လူဇင်ဘတ်တွင်ကုန်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူမှု၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင် virtual နံပါတ်များ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ဘဏ္inာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ လူဇင်ဘတ်ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway လူဇင်ဘတ်တွင်လူဇင်ဘတ်တွင်ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေးနှင့်လူဇင်ဘတ်တွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ လူဇင်ဘတ်တွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိနှင့်လိုက်နာမှု၊ လူဇင်ဘတ်တွင်အိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ လူဇင်ဘတ်တွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိအပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးမှု၊ နှင့်ခ အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုလူဇင်ဘတ်အတွက် lockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
လူဇင်ဘတ်မှာ SARL အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
လူဇင်ဘတ်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ လူဇင်ဘတ်အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
"Million Makers မှာကျွန်တော်တို့လူဇင်ဘတ်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင်ကမ်းလှမ်းသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြေများကိုအစပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း၊ စီးပွားရေးပမာဏအတိုင်းအတာကြောင့်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်အတွက်အဖြေထုတ်ပေးသူများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း လူဇင်ဘတ် (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လူဇင်ဘတ် (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း လူဇင်ဘတ်
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း လူဇင်ဘတ်
လူဇင်ဘတ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်လူဇင်ဘတ်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
လူဇင်ဘတ်ရှိ SARL အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● SARL လူဇင်ဘတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကြေး (ပထမနှစ်) - ဒေါ်လာ ၈၅၀၀
●လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၃၅၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင် SARL အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိ SARL အတွက်အစိုးရသက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေတစ်နှစ်ပေးဆောင်ခြင်း
●လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့် SARL အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးရမည်
●လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိ SARL အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးတစ်နှစ်ပေး
●လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိ SARL အတွက်သင့်အတွက်စံပြကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသရင်းမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ လူဇင်ဘတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိ SARL အတွက်လျာထားသောဒါရိုက်တာ
SARL အတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
SARL အတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှ Millers Makers မှတဆင့်ဖြစ်သည်
လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်မှတ်ပုံတင်လိုပါကလူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လူဇင်ဘတ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်လူဇင်ဘတ်တွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လူဇင်ဘတ်၌ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသည်။ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ၏ကြီးမားသောဖောက်သည်များနှင့်လူဇင်ဘတ်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်လူဇင်ဘတ်၌ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီများအတွက်လူဇင်ဘတ်မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည် ငါတို့မှတဆင့်လူဇင်ဘတ် သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုလူဇင်ဘတ်တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကလူဇင်ဘတ်အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သောသင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်လူဇင်ဘတ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အ ၀ ပေးနိုင်ပါသည်။ အဘို့ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသားနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
လူဇင်ဘတ်မှကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ လူဇင်ဘတ် ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် လူဇင်ဘတ်.
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီ Incoporation နှင့်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
လူဇင်ဘတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြတ်အစွန်းမြင့်မားမှုကြောင့်လူဇင်ဘတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူဇင်ဘတ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များနှင့်လူဇင်ဘတ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းများနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုအရေးကြီးသည်။
လူဇင်ဘတ်တွင် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - လူဇင်ဘတ်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးသတ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
လူဇင်ဘတ်ရှိ SARL အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်လူဇင်ဘတ်ရှိ LLC တွင် -
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိလူဇင်ဘတ် / LLC တွင် SARL အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
လူဇင်ဘတ်ရှိ SARL အတွက်လက်မှတ်ကိုЛюксембург / LLC တွင်လူဇင်ဘတ်လက်မှတ်၏ဝေစု။
လူဇင်ဘတ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောလူဇင်ဘတ် / LLC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော SARL အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ လူဇင်ဘတ်ရှိလူဇင်ဘတ် / LLC တွင် SARL ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, လူဇင်ဘတ်အတွက်လူဇင်ဘတ် / LLC အတွက် SARL ။
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိလူဇင်ဘတ် / LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ လူဇင်ဘတ်ရှိ SARL / လူဇင်ဘတ်ရှိ LLC:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်သည်လူဇင်ဘတ်တွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မပါဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့်လူဇင်ဘတ်၌ခွင့်ပြုချက်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Million Makers ရှိလူဇင်ဘတ်တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်လောင်းကစား၊ လောင်းကစား၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လူဇင်ဘတ်ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္Luxembourgာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိအခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်း၊
လူဇင်ဘတ်ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ရယူရန်မည်သည့်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
လူဇင်ဘတ်နှင့်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ် ၅၀ တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
လူသန်းပေါင်းများစွာကိုလူဇင်ဘတ်တွင်တိုက်ရိုက်သာမကငါတို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့်လူဇင်ဘတ်ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူဇင်ဘတ်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံမှလူဇင်ဘတ်တွင်
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လူဇင်ဘတ်တွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံသည်။
လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လူဇင်ဘတ်မြို့နှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ ခုတွင်ပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီများနှင့်ဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ | လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိ Corporate Services
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လူဇင်ဘတ်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ လူဇင်ဘတ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လူဇင်ဘတ်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိလူဇင်ဘတ်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လူဇင်ဘတ်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်လူဇင်ဘတ်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်
လူဇင်ဘတ်ရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
လူဇင်ဘတ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုလူဇင်ဘတ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် လူဇင်ဘတ်.
လူဇင်ဘတ်တွင် Accounts Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုလူဇင်ဘတ်တွင်သင်အပ်နှံနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို လူဇင်ဘတ်၌တည်၏။
HR အတိုင်ပင်ခံ လူဇင်ဘတ်တွင်လူကုန်ကူးမှုတွင်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုအားဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ လူဇင်ဘတ်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းလူဇင်ဘတ်၌
လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ လူဇင်ဘတ်.
လူဇင်ဘတ်အတွက် Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်လူဇင်ဘတ်မှ။
လူဇင်ဘတ်အတွက် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ လူဇင်ဘတ်ရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပါအ ၀ င်လူဇင်ဘတ်၌သင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - လူဇင်ဘတ်အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် လူဇင်ဘတ်တွင် Business VoIP အပါအဝင်လူဇင်ဘတ်ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များလူဇင်ဘတ်ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှ ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း လူဇင်ဘတ် လူဇင်ဘတ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လူဇင်ဘတ်, လူဇင်ဘတ်တွင် CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
လူကြိုက်များသောဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု | လူဇင်ဘတ်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်လူဇင်ဘတ်တွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေပါ ၀ င်သောလူဇင်ဘတ်သီးခြားဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးသည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရာနေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်လူဇင်ဘတ်၌သူတို့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှယုံကြည်စိတ်ချသည်မှာဖြစ်နိုင်သည့်အရာနှင့်၎င်းကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိနေထိုင်သူများနှင့်လူဇင်ဘတ်တွင် SARL ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းလူဇင်ဘတ်တွင် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကမ်းလွန် SARL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကမ်းလွန် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကမ်းလွန် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , လူဇင်ဘတ် SARL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် SARL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
လူဇင်ဘတ်တွင် SARL ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှု | လူဇင်ဘတ်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း | လူဇင်ဘတ်၌ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းမှု | လူဇင်ဘတ်မှာ IBC ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း | လူဇင်ဘတ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | လူဇင်ဘတ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | လူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်လူဇင်ဘတ်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံခြားသားများအားလည်းလူဇင်ဘတ်၌မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ဖွဲ့စည်းခြင်း LLC၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , လူဇင်ဘတ် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, လူဇင်ဘတ် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိနေထိုင်သူများနှင့်လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်အကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းလူဇင်ဘတ်တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာမှတ်ပုံတင်သောကုမ္ပဏီ၊ လူဇင်ဘတ်တွင်အကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိအော့ဖ်ရှီးလီမိတက်တွင်တာ ၀ န်ယူမှုရှိခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်လီမိတက်တာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိနေထိုင်သူများနှင့်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုနိုင်ငံခြားသားများအားထောက်ခံသည်။ လူဇင်ဘတ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , လူဇင်ဘတ် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, လူဇင်ဘတ် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်လူဇင်ဘတ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ လူဇင်ဘတ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ဖွဲ့စည်းသောကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီ၊ လူဇင်ဘတ်၌ Offshore LLC မှတ်ပုံတင်၊ Offshore LLC လူဇင်ဘတ်ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘာ LLC မှကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, လူဇင်ဘတ် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိနေထိုင်သူများနှင့်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းလူဇင်ဘတ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း, လူဇင်ဘတ် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, လူဇင်ဘတ် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိနေထိုင်သူများနှင့်လူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းလူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်လုပ်ငန်း၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းထားခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
S Люксембургမှာမှတ်ပုံတင် | လူဇင်ဘတ်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ပါ လူဇင်ဘတ်တွင်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း IBC ကိုလူဇင်ဘတ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ လူဇင်ဘတ်၌ LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မည် လူဇင်ဘတ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ လူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ လူဇင်ဘတ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မြို့မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
လူဇင်ဘတ်တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိစျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်မှုရရှိပြီးဖြစ်သည်။ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိလူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိသင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူဇင်ဘတ်မှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်လူဇင်ဘတ်မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းလူဇင်ဘတ်မှာစျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
လူဇင်ဘတ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လူဇင်ဘတ်စီးတီးတွင်မှတ်ပုံတင်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ လူဇင်ဘတ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်း၊ လူဇင်ဘတ်စီးတီးရှိ setup ကုမ္ပဏီ၊ လူဇင်ဘတ်စီးတီးရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်၊ လူဇင်ဘတ်စီးတီးရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။
လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ လူဇင်ဘတ်စီးတီးတွင်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှု
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်၌ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိလူဇင်ဘတ်မြို့တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ , လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများလူဇင်ဘတ် | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများလူဇင်ဘတ်မြို့
လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ လူဇင်ဘတ်တွင်မှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေလူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်လူဇင်ဘတ်မြို့၊ ကုမ္ပဏီလူဇင်ဘတ်တွင်ကုန်ကျသည်။
လူဇင်ဘတ်တွင် SARL မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား လူဇင်ဘတ်မှာ LLC မှတ်ပုံတင် | လူဇင်ဘတ်တွင်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း လူဇင်ဘတ်တွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း လူဇင်ဘတ်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
လူဇင်ဘတ်တွင် SARL ထည့်သွင်းပါ လူဇင်ဘတ်၌ထည့်သွင်း LLC ။ | လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်လီမိတက်တာဝန်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ IBC ကိုလူဇင်ဘတ်တွင်ထည့်သွင်းပါ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်တည်ထောင်ခြင်း LLC ကုမ္ပဏီ လူဇင်ဘတ်တွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ လူဇင်ဘတ်မှာထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ
လူဇင်ဘတ်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူဇင်ဘတ်တွင်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားပြီးလူဇင်ဘတ်၌ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများနှင့်လူဇင်ဘတ်၌အရည်အသွေးပြည့်မီသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့်လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ လူဇင်ဘတ်တွင်လူဇင်ဘတ်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံနှင့်လူဇင်ဘတ်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်လူဇင်ဘတ်တွင်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူများမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားအားလူဇင်ဘတ်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးထောက်ပံ့သည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီးလူဇင်ဘတ်မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကလူဇင်ဘတ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ လူဇင်ဘတ်တွင်လည်းအလားတူပင်လူဇင်ဘတ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိကုမ္ပဏီထူထောင်ရန်သို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် စီးတီး, လူဇင်ဘတ်စီးတီးအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိစျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
Gouvernement du Grand-Duchéကလူဇင်ဘတ်
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ Banque Centrale du BCL
Bourse က de လူဇင်ဘတ်
Chambre de Commerce du Grand-Duchéကလူဇင်ဘတ်
Destination Luxembourg - ခရီးသွားခြင်းနှင့် Tour ည့်လမ်းညွှန်များ
Bibliothèque nationale ကလူဇင်ဘတ်
စင်တာ National de la littérature CNL
Musé d'Art Moderne Grand-Duc Jean
မူဆယ်အမျိုးသား d'Histoire et d'Art
မူဆယ်အမျိုးသား d'histoire naturelle
Portail de l'Environnement du Grand-duché de လူဇင်ဘတ်
ရံပုံငွေHëllef fir d'Naturre
ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ် - လူဇင်ဘတ်
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - လူဇင်ဘတ်
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ Banque Internationale
Banque Transatlantique လူဇင်ဘတ် [eu]
Société Nationale က de Crédit et d'Investissement
Societe General မှ
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ လူဇင်ဘတ် အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●လူဇင်ဘတ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●လူဇင်ဘတ်မြို့အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများမှာနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်မြို့တွင်းမှလည်းကောင်း၊
●လူဇင်ဘတ်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူဇင်ဘတ်ဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုနဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုခု (သို့) လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●လူဇင်ဘတ်မြို့အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူဇင်ဘတ်မြို့တွင်းမှသို့မဟုတ်လာရောက်သူတွေကမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●လူဇင်ဘတ်မြို့အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလူဇင်ဘတ်သို့ဖြစ်စေ၊ လူဇင်ဘတ်သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေအန္တရာယ်ရှိဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သက်ဆိုင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်သည်မဟုတ်၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုလူဇင်ဘတ်သို့ (သို့) လူဇင်ဘတ်သို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများမှာမွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်မြို့မှသို့မဟုတ်လူဇင်ဘတ်သို့လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●လူဇင်ဘတ်မြို့အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူဇင်ဘတ်သို့ (သို့) မှဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●လူဇင်ဘတ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေအခြေခံလူဇင်ဘတ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●လူဇင်ဘတ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောလူဇင်ဘတ်မြို့မှလူဇင်ဘတ်သို့ (သို့) ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●လူဇင်ဘတ်မြို့အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လူဇင်ဘတ်မြို့ရှိလူဇင်ဘတ်မြို့မှဖြစ်စေ၊
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် လူဇင်ဘတ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် လူဇင်ဘတ်, လူဇင်ဘတ် ဘဏ်အကောင့်, လူဇင်ဘတ် ယုံကြည်မှု လူဇင်ဘတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု လူဇင်ဘတ်။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ လူဇင်ဘတ်အဘို့
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-luxembourg/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-luxembourg/ မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-luxembourg/